Matongerwo eNyika, 01 Ndira 2020
Chitatu 1 Ndira 2020
Ndira 01, 2020
Mapurisa Anoti Ari Kutsvaga Mamwe "MaShurugwi" Akaponda Constable Hokoyo
Gurukota rinoona nezvemukati menyika VaKazembe Kazembe vanoti mapurisa achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya yekuurayiwa kwemumwe mupurisa Constable Wonder Hokoyo paGood Hope Mine kuBattlefields, Kadoma nemusi weMugovera.
Amai Marry Mubayiwa Vorapwa naVachiremba vekuJeri reChikurubi
Rimwe gweta riri kumiririra Muzvare Marry Mubayiwa, mudzimai wemumwe mutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga vanonzi vave kurapwa navanachiremba vekujeri reChikurubi.
Vakawanda kuManicaland Vanoti 2019 Raive Gore reMarwadzo
Vanhu vakawanda mudunhu reManicaland iro rakawirwa nedambudziko redutumupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai vanoti gore ra2019 rainge rakavaomera zvikuru.
Vamwe Voshanyira Mapako eChinhoyi paZororo reGoredzva
Vanhu vakawanda vashanyira mapako eChinhoyi nhasi vakurudzira Zimparks kuti ivape munhu ane ruzivo nezvenzvimbo iyi kana kuti Tour Guide pamadhora gumi nemashanu avanenge vabhadhara kuti vapinde panzvimbo iyi.
Vari Kunze kweNyika Vokurudzira Kuchengetedzwa kweKodzero muGore Rino
Sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa, reZimbabwe Global Forum, riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu mugore rino ra 2020 sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika.
Bazi rezveHutano Rinokwidza Mari dzeKurapwa muZvipatara zveHurumende
Varwere vakawanda vanonzi vachafira mudzimba vachitadza kuwana mari dzekuenda kunorapwa kuzvipatara zvehurumende zvichitevera danho rakatorwa nehurumende kutanga kwegore rino rekukwidza mari dzinobhadharwa nevarwere muzvipatara zvavo zvese zvemunyika.
Zvita 31, 2019
OK Zimbabwe Yopa Homwe yaMeya weHarare Rubatsiro Rwekupa Varombo
Vamwe vanoshaya muHarare vave kupinda muna 2020 vachinyemwerera mushure mekunge kambani yeOk Zimbabwe yapa masangano anobatsira vanoshaya chikafu nezvimwe pasi pehomwe yeHarare Mayor’s Cheer Fund
Amai Marry Mubaiwa Voramba Vari muHusungwa
Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chemudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaConstanitno Chiwenga, Muzvare Marry Mubaiwa, chekuti vatongwe vachibva kumba.
Vamwe Voti 2020 Achangooma sa2019 Kana Kudarika Mune zveUpfumi
Pasi rose riri kuonekana negore ra2019, asi vakawanda muZimbabwe vanoti iri igore ravasingadi kuyeuchidzwa nezvaro zvakare nekuti rakave gore rakavaigira matambudziko, zvikuru mune zveupfumi.
VaKazembe Vanoti Vanoti Vanofarirawo Winky D Uye Haana Kurambidzwa Kuparura Dambarefu Rake
Gurukota rinoona nezvemukati menyika VaKazembe Kazembe vanoti mapurisa haana kumboyedza kurambidza muimbi Winky D kuparura dambarefu rake Njema kuHarare International Conference Centre nhasi.
MDC Inoti Haisi Kuzopinda Mugungano RePOLAD
Mapato ezvematongerwo enyika ari mugungano re Political Actors Dialogue, kana kuti POLAD, anoti anoda kuita misangano nemasangano ekunze kwenyika anosanganisira SADC, African Union, European Union nenyika dziri mumubatanidzwa weUnited Nations kuti atsanangure zvavari kuita.
Zvita 30, 2019
Kanzuru yeHarare Yoronga Kusimudzira Guta muGore Rinouya ra2020
Meya veguta reHarare, VaHerbert Gomba, vanoti kanzuru yeguta ravo ine hurongwa hwakawanda hwekusimudzira guta mugore rinouya ra 2020, kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyanasiyana.
VaMnangagwa Vokurudzira Makurukota Avo Kusiyana neHuwori
Sarudzo dzeKutsvaga Achamirira MDC muBy-Election kuChegutu Dzinotadza Kubudirira
Hurumende Yoferefeta Kanzuru yeMarondera
Mvura Yonetsa Kuwana kwaMutare
Vamwe Vapoteri muBotswana Voramba Kudzoswa kuZimbabwe